SOMALILAND OO CIIDAMO U DIRTAY WEFDI KA SOCDA PUNTLAND OO KU SUGAN BUUHOODLE - Awdinle Online
SOMALILAND OO CIIDAMO U DIRTAY WEFDI KA SOCDA PUNTLAND OO KU SUGAN BUUHOODLE
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Somaliland oo ku hubaysan noocyada kala duwan ee Gaadiidka Dagaalka ayaa ku wajahan degaanno ka tirsan Gobolka Cayn xilli wefdi ka socda Puntland uu ku suganyahay Magaalada Buuhoodle ee Xarunta Gobolkaas.
Ciidamada Somaliland oo markii hore watay 9 Gaadiidka Dagaalka ah ayaa 2 kamid ah Shil ku galeen halka loo yaqaanno Tuula Samakaab oo qiyaastii 40 KM dhanka waqooyi kaga beegan Magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool.
Shilkaas ayaa sida la sheegayo waxa ka dhashay Khasaare dhaawacyo ah oo gaaray Ciidamadii labada gaari saarnaa waxaana sii gudbay 7 Gaadiidka Dagaalka ah kuwaas oo ku wajahan dhanka Gobolka Cayn.
Wararku waxay sheegayaan in Ciidamada Somaliland ku sii jeedaan Degaannada Ceegaag iyo horufadhi oo ka tirsan Gobolka Cayn si ay halkaas uga hor is-taagaan wefdi ka socda Puntland oo doonaya in ay qayb- ka noqdaan Nabadaynta Degaanka.
Wefdiga Puntland oo uu hoggaaminayo Wasiirka Caafimaadka Dr Jaamac Faarax Xassan ayaa shalay gaaray Degmada Buuhoodle waxaana ay sheegeen in ay u socdaan Nabadaynta Beelo ku dagaallamay Degaannada Ceegaag iyo Horufadhi.
Previous articleHadalkii Wasiir Goodax Barre oo laga Jawaabay
Next articleDhuusamareeb oo ku wajahan Ra’iisul wasaare Kheyre
Madaxweynaha Galmudug oo lagu eedeeyay in uu ku fashilmay sugida Amniga
Somaliland oo ku dhawaaqday hadal culus, kaddib Go’aankii DFS
Jadwalkii lagu heshiiyay ee doorashada Aqalka Sare oo fashilmay
Ciidanka Dowladda oo toogtay Nin Miino Aasayay
Musharixiinta oo Shir kale u furmay & Arrimo xasaasi ah oo looga hadlayo